Mpifankatian’ny Afovoany Atsinanana, Mitambara! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2015 7:59 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, Français, Português, polski, русский, Dansk, 简体中文, 繁體中文, English
Tanora mpifankatia avy ao Maraoka. Mpaka sary: Alexandre Baron (tao amin'ny Flickr: Zon'ny mpamorona Creative Commons License).
Mikaroka tantaram-pitiavana nandritra ilay nantsoina hoe Lohataona Arabo ny MENA Love Map (Sarintanin'ny Fitiavana ao MENA). Ny tanjon'izy ireo dia ny hanangona sy hamoaka “tantaram-pitiavana 100 avy ao amin'ny manodidina ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra (MENA) mba hanehoana amin'izao tontolo izao fa nitondra fiovana ara-tsosialy tsy manam-paharoa ny Lohataona Arabo.” Mila ny fandraisanao anjara izy ireo.
Ny hevitra ôrizinaly dia avy amin'ireo mpifankatia tsy mitonona anarana, izay mpifankatia nihaona nandritra ity vanim-potoana ity izy ireo, toy izao ny tantarany.
Maya Norton (MN): Fantatro fa tsy te hitonona anarana ianareo. Inona no azonareo ambara momba anareo?
Mena Love Map (MLM): Tsy hanonona anarana mihitsy izahay raha tsy mahangona tantara 100. Bilaogera roa sy mpifankatia avy ao amin'ny firenena samihafa ao MENA izay niampitampita lalana taorian'ny revolisiona [Lohataona Arabo] izahay, ary nanapa-kevitra hiara-hitolona hoan'ny fitakianay tsirairay avy sy hifanohana. Izany no mahatonga anay matoky fa ny fitroarana tao amin'ny faritray dia tokony hotrandrahana fa tsy raisina ho krizy fotsiny ihany.
MN: Raha milaza ianareo hoe “tantaram-pitiavana”, tianareo lazaina ve hoe ireo tantara romantika na vaovao mahafaly izay nitranga taorian'ny Lohataona Arabo?
MLM: Tsy tianay mihitsy ny fiteny hoe «Lohataona Arabo». Mihevitra izahay fa noforonin'ny tandrefana hibaikoana ny hoavinay io. Ny tianay ambara amin'ny “tantaram-pitiavana” dia izay rehetra nanome anay aingam-panahy, nanintona anay sy tonga na teraka taorian'ny hetsika 2010 tao amin'ny faritra misy anay, izay niatombohan'ny fanantenana vaovao sy endrika vaovaon'ny fijoroana hisedra, fijoroana amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana, sy fijoroana amin'ny alalan'ny fitiavana.
MN: Avy aiza ny hevitra niavian'ny MENA Love Map?
MLM: Avy amin'ny fifankatiavan'ny tsirairay ny hevitra, mifanohana amin'ny tolona ataonay sy miady hoan'ny fitakianay ao amin'ny faritra. Nanomboka niresaka momba izany hevitra izany tizahay amin'ny fahavaratra lasa teo nandritra ny ady tao Gaza, Irak, ny fanonganam-panjakana tao Ejypta, ny vono-olona mitohy ao Syria, sns. Tonga tamin'ny faratampony izany tamin'ity fahavaratra ity izay nitsefotra daholo ny zava-drehetra ka nipatitaka tao amin'ny faritra, tsy niteraka afa-tsy fahakiviana tanteraka.
Nihevitra izahay fa: mahery isika amin'ny fahefantsika hitia, hifanohana mihoatra sisintany na dia eo aza ireo zavatra iaretan'ny firenentsika, ary nahavita nanohy ny tolona hoan'ny fanantenana, fahavononana sy [miaraka amin'ny] tsiky lehibe eo amin'ny tava izahay. Nihevitra izahay fa: tsy izahay ihany no mpifankatia afaka nihaona, tafaray, sy latsa-pitia indrindra noho ireo krizy ireo tao amin'ny faritra. Te-hampiely ny herin'ny ftiavana hoan'ireo namanay ao amin'ny faritra izahay.
MN: Tahaka ny ahoana ny ho endriky ny sarintanin'ny mpifankatia?
MLM: Ny hevitra voalohan'ny sarintany dia ny hitendry [click] ireo firenena izay ahitana tantara misy ifandraisana amin'ireo toeram-pihaonana ivelan'ny sisintany. Fantatrao, zava-dehibe ao amin'ny faritra MENA ny hoe sisintany, indrindra ao amin'ireo firenena tahaka an'i Bahrain, Syria sy Libya, Ejypta ary koa ireo nandao ny fireneny amin'ny maha-mpialokaloka ary tsy afaka miverina intsony.
Koa dia ny fiampitana sisintany sy ny nahafahana nihaona tamin'ny olo-tianao tany ambadiky Mediteranea na ranomasimbe hafa no tena dikan'ny fametahana an-tsarintany.
MN: Inona no tena tanjon'ny habatranonkala?
MLM: Sehatra natao hanangonana, hanandraketana tahiry, sy hamoahana tantara fotsiny ihany ny habaka. Ny tanjonay dia ny manangona, mitantara sy mizara ireo tantaram-pitiavana avy amin'ireo mpifankatia.
Misaotra ireo mpanorina ny MENA Love Map nanaiky niresaka taminay. Raha tsy manana tantaram-pitiavana handraisana anjara ianao saingy liana hanampy ny tetikasa, afaka misoratra anarana ianao ho mpilatsaka an-tsitrapo.